तराई मधेशका १२ जिल्लाहरुमा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ । तराई मधेशको सबै कृषियोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरि ठूला सिंचाई आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुका साथै निर्माणाधीन अन्य सिंचाई आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष तराई–मधेशमा ४८ वटा डिप ट्युवबेलहरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिंचाई आयोजनाहरुको निर्माणको लागि रु. ३ अर्ब ७६ करोड विनियोग गरेको छ । यसै गरी आवश्यक मर्मत सम्भावको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका वृहत् सिंचाई आयोजनाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि रु. ५२ करोड छुट्याएको छु ।
आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने गरि सिंचाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । निर्माणाधीन सिंचाई आयोजनाहरुलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । निर्माणाधीन सतह र भूमिगत आयोजनाहरुको निर्माण एवं भइरहेका सिंचाई प्रणालीहरुको मर्मत सम्भार तथा क्षमता विस्तार गरि आगामी आर्थिक वर्षमा थप २८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ । सबै जिल्लाहरुमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मझौला सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ । मझौला सिंचाईका लागि रु. ३ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सतह र भूमिगत सिंचाईको सम्भावना नभएका टार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । लिफ्ट सिंचाईका सम्भाव्य स्थानहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गरि कम्तिमा ५० हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने किसानलाई नवीकरणीय उर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
व्यवसायिक कृषि उपज, खासगरि तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा ७ हजार १ सय स्यालो ट्युवबेल जडान गरिनेछ । ठूला तथा मझौला सिंचाई प्रणालीहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरि उनीहरुकै स्वामित्वमा सञ्चालन र मर्मत गर्ने उपयुक्त संरचना खडा गरिनेछ ।
सुनकोशी, कालीगण्डकी र ठूलीगाड कैलालीजस्ता इन्टरवेसिन वाटर ट्रान्सफर आयोजनाहरुका साथै कन्काई र राप्ती बाँध जलाशययुक्त योजनाहरुको अध्ययन शुरु गरिनेछ ।
कृषि प्रचार सेवालाई पचहत्तरै जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक जना कृषि वा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न बेट विनियोजन गरेको छु । कृषि सूचना प्रसारका लागि मोबाइल फोनको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्नाका साथै खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने गरि कृषि अनुसन्धान गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानका लागि रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जालको विस्तार गरिनेछ । ग्रामीण र कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि रु. १५ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु । कृषि उत्पादनका लागि विद्युतीकरणको ठूलो भूमिका रहने हुँदा तीन वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
धान, गहुँ, मकै, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरि उत्पादनका साधनहरुमा पहुँच, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । उच्च मूल प्राप्त गर्न सकिने र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजहरुको उत्पादन र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । यस्ता वस्तुहरुको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरि निर्यात वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कुनै गाउँ विकास समितिले प्रांगरिक कृषि उपज मात्र उत्पादन गरेमा त्यस्ता गाविसलाई दिइने अनुदानमा ५० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
मत्स्यपालन कार्यलाई व्यावसायिक बनाइनेछ । आगामी वर्षमा थप ६ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिनेछ । भुरा माछा उत्पादन र थप १ हजार हेक्टर जमिनमा पोखरी निर्माण गर्न रु. ३७ करोड विनियोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक तथा प्रांगारिक मल र उन्नत बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ६ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
निजी वा सहकारी क्षेत्रले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई कृषि विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डबमोजिम शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गरि सञ्चालन गर्न चोहमा पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्ता शीतघर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ । कृषि तथा पशु विमा प्रिमियममा अनुदान दिने नीति कायमै राख्दै यस्तो विमा प्रिमियममा लाग्दै आएका मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छु ।
सम्भाव्यताका आधारमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । धूलो दूध उत्पादन गर्न सार्वजनिक तथा निजी डेरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप ५० भन्दा बढी गाई, भैंसी पाल्ने पशुपालक कृषकलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन गर्ने फोडर मेसिनको खरिद मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न खेत जोत्ने ट्याक्टर पावर टिलर, गहुँ काट्ने र चुट्ने मेसिन जस्ता यन्त्रहरुको आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि विकासतर्फ रु. २६ अर्ब ६८ करोड, सिंचाईतर्फ रु. २० अर्ब २२ करोड, भूमिसुधारतर्फ रु. ४ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु । वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई रु. १२ अर्ब २७ करोड छुट्याएको छु ।